२०७८ कात्तिक २ मङ्गलवार
पाकिस्तानमा महिलाले एकैपटक जन्माइन सात सन्तान
चर्चित बाबा रामरहिमलाई १९ वर्षपछि जन्मकैदको सजाय
सुरक्षा प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन: अनाहकमा कसैको जीवन नगुमोस्
जेम्स बोन्डको सम्पत्ति सन्तानले नपाउने
भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ५० रुपैँया सस्तो
केपी ओलीले झापाबाटै जित्दैनन् : मेटमणि चौधरी
सप्तरीमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै
# दीपबहादुर बडुवाल
# रामकुमारी झाँक्री
४८ सन्तानकी आमा मीना, झाँगिदै छ साझा फूलबारी - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
४८ सन्तानकी आमा मीना, झाँगिदै छ साझा फूलबारी
आइतबार, असोज २४ २०७८
मोरङको उर्लाबारीकी मीना बरालको ४८ जना सन्तान छन् भन्दा कसैलाई पत्यार लाग्दैन यद्दपि यो सत्य हो । आफैले त्यति धेरै सन्तानलाई जन्म नदिए पनि मीनाले सडकमा भेटिएका बालबालिकालाई कर्म दिने आमाको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् ।
वि.सं २०५७ सालमा महिला विकास तथा बालबालिका चेतना केन्द्रद्वारा असहाय वृद्ध अनाथ आश्रम नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेर काम थाल्दा मीनाले ‘कमाइखाने’ भाँडो बनाउन खोजेको भन्दै कतिपयले कुरा काटे । त्याे बेला उनलाई राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि साथ नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको थियो । तर, मीनाको दिगो र दूरदर्शी योजना मुताविक उर्लाबारी–७ मा बाल गृह सञ्चालनमा ल्याइएको पनि २१ वर्ष भइसकेको छ ।
वि.सं २०२२ सालमा १० वर्षकै उमेरमा मोरङबाट विवाह गरेर ताप्लेजुङ पुर्‍याएकी मीनाको वैवाहिक जीवन सफल हुन नसक्नु नै यो बालगृह जन्मिने मुख्य कारण हो । त्यतिबेला पढ्ने उमेरमा विवाह भएकाले पछुतो मानिरहेकी उनले नयाँ घरमा लामो समयसम्म संघर्ष गरिरहिन् । तर, श्रीमानले अर्की श्रीमती थपेर आफूलाई पाखा लगाएपछि आत्मसन्तोष र शान्तिको खोजी गर्दै उनी समाज सेवामा लागिन् ।
आफूले सानैमा विवाह गर्दा भोगेको जस्तो पीडा अरू कुनै पनि अनाथ बालबालिकाले भोग्नु नपरोस् भनेर मोरङ उर्लाबारीमा असहाय वृद्ध अनाथ आश्रम खोल्ने निधो गरिन् । उनको यो अभियानमा अन्य महिलाहरूले पनि होस्टेमा हैसे मिलाए । मीनाकै योजनामा सञ्चालनमा ल्याइएको नमूनाबाल गृह प्रदेश १ कै उत्कृष्ट बाल गृहकारूपमा रहेको छ ।
समाजसेवाप्रति उत्साहित मीना आफ्नो पीडा भुलेर ४८ जना बालबालिकाहरूको अभिभावक बनेकी छन् । मीनालाई बालबालिकाले ‘आमा’ भनेर सम्वोधन गर्छन् । दिनरात नभनेर उनी बालबालिकाको सेवामा जुटिरहेकी छन् । काखे शिशुदेखि उच्च मावि तहसम्म पढ्ने बालबालिकाकी आमा हुन्, उनी । उनले अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा ठूलो मावन धर्म ठानेकी छन् । त्यसैले पनि उनी आफ्नो गच्छेअनुसारको मानव धर्ममा निरन्तर सक्रिय भएर लागिरहेकी छन् ।
मीना भन्छिन्, ‘सुरुमा विरोध गर्नेहरूले पनि अहिले मलाई सकारात्मक रूपमा लिन थालेका छन् ।’ समाजमा उनको कामप्रति सकारात्मकता बढेपछि उनलाई थप उर्जा मिल्यो। आफ्नो लगाव र मेहनतका कारण समाजसेवाका कर्महरूमा कम बाधा अड्चन आएका उनले सुनाइन् । उनी निरन्तर आफ्नै गतिमा समाजसेवामा हिँडिरहेकी छिन् ।
वैवाहिक जीवन असफल भएपछि अर्को विहे गरेर सीमित सन्तानकी आमा बन्ने अवसर छाडेर असंख्य सन्तानकी आमा बन्ने अवसर संगालिरहेकी मीना अहिले मुलुककै उदाहरणीय आमा गनिएकी छन् । अहिले मीनाका ४८ जना सन्तान छन् । मीनाले त्यति धेरै सन्तानलाई आफ्नै कोखबाट जन्म नदिए पनि सबैका लागि जन्म दिने आमाकै बराबर ममता दिएर हुर्काइरहेकी छन् ।
झाँगिदै छ साझा फूलबारी
वि.सं २०५९ सालमा आश्रमको भवन निर्माण पूरा नहुँदै मीनाले ७ जना असहाय बालबालिका र दुई जना वद्धवृद्धालाई आफ्नै घरमा राखेर पालनपोषण थालेकी थिइन् । भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै आश्रममा बालबालिका र वद्धवृद्धालाई स्थानान्तरण गरियो । अरू असहाय बालबालिका र वृद्धवृद्धा पनि थपिन थाले ।
हाल मेचीदेखि महाकालीसम्मका २२ जिल्लाका ४६ जना बालबालिकाहरू यहाँ आश्रित छन् । कर्णाली प्रदेशको दैलेखसहित पाल्पा, चितवन, भक्तपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, सखुंवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायत जिल्लाका बालबालिकाहरू यहाँ एकै छानामुनि हुर्किरहेका छन् । जसमा लोपोन्मुख चेपाङ, अल्पसंख्यक धिमाल, उच्च हिमाली क्षेत्रका शेर्पा, तराइका दनुवार, दलित, बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बु र मधेशी समुदायका बालबालिका छन् ।
मीनाले थालेको यो अभियानमा स्थानीय समाजसेवी तथा महिला नेतृहरू भागिरथा अधिकारी, सीतादेबी निरौला, अतिहिरा राई, हीरादेबी राई, चन्द्रकला गौतम, सुशिला थापा, कविता थापा, देवका खनाल, मीनादेबी कार्की, लक्ष्मीदेबी सुब्बा र रामप्यारी तामाङले सुरुवाती चरणमा साथ र हौसला दिएका थिए । कतिपय अझै पनि उत्तिकै सकृय छन् ।
महिलाहरूको अगुवाइमा थालिएको यस सामाजिक अभियानमा २०६५ सालदेखि पुरुषहरूको पनि सहभागिता रह्यो । सञ्चालक समितिमा महिलाहरूको ६० प्रतिशत र पुरुषहरूको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ । सोही गृहकी बालिकाको नामबाट यसको नाम नमूना बालगृह राखिएको हो । बालगृह सञ्चालन गर्न वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मीनाले जानकारी दिइन् ।
मीनाले आफ्नो भएभरको सम्पत्ति बालगृहको नाममा हस्तान्तरण गरिसकेकी छिन् । मीनाले गृहलाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको ७० लाख रुपैयाँ बालबालिकाको भबिष्य निर्माणका लागि प्रदान गरेकी हुन् । बालगृहको अक्षकोषमा रहेको रकमले उर्लाबारी–७ को बैँशाबारीमा एक विघाह पाँच कट्ठा जग्गा खरिद गरिएको छ । उक्त जग्गामा नमूना कृषि फार्म दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ ।
शिक्षा, रोजगारी र आत्मनिर्भताको बाटो
बालगृहमा रहेका दुई जना बालिका कक्षा ११ मा कृषि बिषय लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, पाँच जना उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् भने आठ जना स्थानीय निजी विद्यालयमा अध्ययरत छन् । त्यस्तै, उर्लाबारी–८ को लक्ष्मी माविमा १२ जना अध्ययरत छन् भने २ कक्षासम्मका १९ जना बालबालिका सोही गृहमा रहेको नमूना सदनमा पढ्छन् ।
उनीहरूमध्ये केहीको शुल्क विद्यालयले छुट दिएका छन् भने केहीको बालगृहले नै व्यहोर्ने गरेको छ । बालगृहभित्रै चल्नेगरी दर्ता भएको नमूना शिक्षा सदन पनि पाँच वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छ । ३ कक्षासम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपनि आवश्यक सहयोग नजुटेका कारण २ कक्षासम्म मात्र सञ्चालनमा छ ।
बालगृहमा रहेको नमूना बाल केन्द्रमा एक जना सहयोगी शिक्षिकालाई मासिक रुपमा ३ हजार रुपैँयाबाहेक अन्य सहयोग राज्यबाट प्राप्त नभएको गृहकी सहसचिव सुशिला थापाले बताइन् । स्थानीय गरिब, विपन्न तथा बालगृहका १९ जना गरी ३६ जना बालबालिकाहरू नमूना शिक्षा सदनमा २ कक्षासम्म अध्ययन गर्छन् । बाल गृहमा रहेको विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरूको ब्यवस्था नभएकाले पठनपाठनमा समस्या हुने गरेको छ । देशविदेशमा रहेका सहयोगीदाताहरूको भरमा चलिरहेको बालगृहमा सरकारी सहयोग भने अझै पुग्न नसकेको मीनाले सुनाइन् ।
आठ जनाले पाए नागरिकता
नमूना बालगृहमा आश्रित आठ जनाले नेपाली नागरिकताकाे प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनीहरूको नागरिकता बालगृहले नै बनाइदिएको हो । यहाँ बस्ने प्रत्येक बालबालिकाको जन्मदर्ता उर्लाबारी नगरपालिकाले गर्नेगर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत बालगृहले नागरिकता बनाइदिने गरेको मीनाले बताइन् ।
नागरिकता बनाउँदा बाबु वा आमाले गर्ने सनाखत बालगृहले नै गर्दा अहिलेसम्म कुनै कानुनी र व्यवहारिक अड्चन भने नदेखिएको उनको भनाइ छ । सबैको साथ र सहयोगका कारण नागरिकता बनाउन सहज भएको उनी बताउँछिन् । बालगृहमा आश्रित सात जना सक्षम भइ हाल अध्ययनसँगै रोजगारीसमेत गरिरहेका उनले बताइन् ।
उनीहरुलाई आफन्तको खोजी गरी पुर्नस्थापित गरिसकिएको छ । त्यस्तै, रीता विकले गृहबाटै विवाह गरी आफ्नो घरजम गरेर बसेकी छिन् भने राम राउत बालगृहकै एम्बुलेन्स चलाउँछन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, असोज २४ २०७८ १०:२३:१८
१८ बर्षिया सुजितासहित चारजना रङ्गेहात समातिए !
बिहेपछि झनै बोल्ड बनेकी आँचल दशैं भ्याकेसन मनाउन उदिपसँग दुबईमा
मुगु दुर्घटनामा बाँचेका घाइते भन्छन्, ‘बस चार बल्ड्याङ खाँदासम्म होस थियो, त्यसपछि के भयो थाहा छैन’
कडा सुरक्षाबिच १८ दिनपछि रोजिनाको अन्तेष्टि
ब्रा देखाउँदै एयरपोर्ट पुगेकी उर्फी फेरि मोजाको ब्रा लगाएर सडकमा
कलाकार पवन खतिवडा(म्याकुरी) ले गरे अन्तरजातिय/अन्तरदेशिय विवाह
मोरङमा कोठाभित्र मृतावस्थामा भेटिइन् रोजिना, हत्या गरेको हुनसक्ने आशङ्का
रोजिना गिरी मृत्यु प्रकरण: हत्या कि आत्महत्या ?
नोबेलमा शल्यक्रिया गरेर ढाडबाट निकालियो ५ किलोको मासुको डल्लो
‘सेल्फी रोड’मा यौन क्रियाकलापमा लिप्त एक जोडीलाई प्रहरीले समात्यो
हुम्लाका स्थानीय भन्छन्,’चीनले नेपाली भूमि मिचेकै हो’
जब निर्दोष व्यक्तिलाई युट्युबरले अपराधी ठहर्‍याए !
रानीले भेट्न नमानेपछि, ‘माइती प्रवेशमा रोक लगाएजस्तै भयो’ : रुबी राणा
सांसदका छोरासँग थिएन लाइसेन्स, पक्राउ गर्न प्रहरीको आनाकानी
किन विश्वकै २ ठूला प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर एक आपसमा भेटिँदा पानी मिसिँदैन ?
महानायक राजेश हमालले किन दशमीको दिन टिका लगाउँदैनन् ?
मन्दिरमा पुजा गर्न पाउनुपर्छ भन्दा चितवनमा दलितलाई कुटेर हत्या गरियो
खुकुरी राखेको मिलेन भनेर गोर्खा अफिसरले थर्काए, अक्षय कुमारले मागे माफी
यो दसैँमा पनि छोरा आएन…
लिम्बू समुदायको धाननाच लोप हुँदै, संरक्षणमा युवापुस्ताको ध्यान गएन
बुबाको मृत्यु र आमाले दोस्रो बिहे गरेपछि १४ वर्षीय संगीता भाइबहिनी पढाउँदै घर सम्हाल्छिन्
दुखीको दसैं : त्रिपालमुनि नै बित्ने भयो सुकुम्बासीको दसैँ
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको दसैँ : जेठो दाजुबाट टीका, शक्ति पीठहरुको दर्शन, शुभेच्छुकलाई जमरा लगाइदिने
दसैँमा वृद्ध बुबाआमालाई मिस गर्दै नागरिककाे सुरक्षामा खटिनेछु : एसएसपी अशोक सिंह
संविधान आएर के देशको विकास भयो त ?
असोज ३ २०७८
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस- २०२१, निराश मनमा आशा जगाऊ !
भदौ २५ २०७८
श्रीकृष्ण दयाका सागर हुन्
भदौ १४ २०७८
‘हाम्रो धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजलाई जीवन्त राख्नुपर्छ’
भदौ ६ २०७८
३ बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाउँदा मख्ख छिन् पूर्णिका
मुगु दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने २८ मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरू
घान्द्रुक दुर्घटनामा दुवै छोरी गुमाएकी आमा भन्छिन्, ‘जन्माउँदा मेरो कोख दुखेन तर आज सारा शरीर पोलीरहेछ’
भोलिबाट बुध ग्रहले चाल परिवर्तन गर्दा यी ५ राशिलाई फाइदै फाइदा
मलाई मासु कम भयो भन्दा बुबाले गरे छोराको हत्या
सुदूरपश्चिम प्रदेश : पुस्कर पौडेल